Hayadda ceeymiska oo adkeeynaysa baaritaannadeeda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Boqolkii toban ayey khaladaad ka muuqdaan gunnada waalidiinta. sawir: Maja Suslin/TT
Hayadda ceeymiska oo adkeeynaysa baaritaannadeeda
La daabacay tisdag 24 september 2019 kl 23.18
Hayadda caymiska qaran ee lagu magacaabo Försäkringskassan ayaa adkeeyn doonta howlaheeda dul kala socodka ee dhaqaalaha gunnada waalidka la siiyo fasaxa ilmaha loo qaato inta ey yar yihiin.
Iyadoona ey magaalada Skelefteå ka howl geli doonaan koox baaritaanno kedis ah ku sameeyn doonta howlahaa. Alexandra Wallin, waa madaxa laanta caymiska ee dhallaanka iyo qooysaska ee hayaddal.
– Waxaannu ogsoonnahey iney jiraan dhaqaale gunno ee khalad loo siiyo waalidiinta, kolka ilmaha ey guryaha la joogaan. Howshayaduna, hayad ahaan waxay tahay iay gunnada ey xaqa u leeyihiin gaarto waalidka xaqa u leh. Iyadoo hadalkeedii sii wadatana sheegtay in khaladaad ey ka muuqdaan boqolkiiba toban kiisaska gunnada waalidiinta la siiyo, sida ay sheegtay mar uu warreeysi la yeeshay Simon Andrén, oo ka howl gala laanta wararka Ekot.
In la kordhiyo kontroollada lagu sameeyo howlahan ayaa u sahlaya in waalidku horraantaba soo dalbadaan ama helaan gunnada ey xaqa u leeyihiin. Waayo way ka sahlan tahay in horay loo saxo khaladaadka inta aan gunnada la bixin, sida ay sheegtay.
-Khaladaadka dhaca ayaa isugu jira ku talo gal iyo qaar kama’ba ah. Waa mid waalidiinta aannu ka caawineeyno haddey khaladaadku yihiin kuwo gama’ ah. Iyada oo la joojiyo dirista lacagtaasi, si hadhow looga baxsado inay qaan ku noqoto oo dib loo soo celiyo, sida ay sheegtay Alexandra Wallin, madaxa laanta ceeymiska waalidiinta iyo dhallaanka.
Hayadda ceeymiska qaran ayaa iminka baaritaannadaa ku sameeya mashiinno iyo dabadeed kolka gunnada la bixiyey.